”Waa inaan u midownaa xoojinta dowladnimada!” – Maalinta Calanka Somalia oo la maamuusay + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waa inaan u midownaa xoojinta dowladnimada!” – Maalinta Calanka Somalia oo la...
”Waa inaan u midownaa xoojinta dowladnimada!” – Maalinta Calanka Somalia oo la maamuusay + Sawirro
(Muqdisho) 12 Okt 2021 – Munaasanad lagu maamuusayo Maalinta Calanka Somalia ayaa lagu qabtay Madaxtooyada Dalka Somalia ee Villa Somalia, halkaasoo ay joogeen qaar ka mid ah madaxda sare ee dalku.
”Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo Maalinta asaaska Calanka ee 12-ka Oktoobar, ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka,” ayaa lagu bilaabay War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada.
”Madaxweynaha oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aaddan maalinta qiimaha badan ee Calanka ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama oo ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadkii 1954-kii la gardaadiyey Calankeenna oo ah astaan ka turjumaysa gobannimada, wadajirka iyo midnimadeenna.
”Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda, si loo ilaaliyo dhaxalka awooweyaasheenna, jiilasha danbe na loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan.” ayaa lagu soo afjaray.
Previous articleHowlgalka AMISOM ee Somalia oo weji cusub qaadan kara & qorshahaa oo helay taageero muhim ah
Next articleDEG DEG: DF Somalia oo si ”xooggan uga hortimid” qorshe lagu ballaarinayo Howlgalka AMISOM